हामीले गर्भमा राखेर जन्माएको पुरुषसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्ने ? – YesKathmandu.com
सोमबार २०, भदौ २०७३
अहिले महिलाको मात्र कुरा उठिरहेका समय छ । यस्तो समयमा हामीले पुरुषहरुलाई पनि उचित न्याय दिनुपर्दछ । महिलाले अत्यन्तै अत्याचार गरेको पुरुष पनि मैले यहि समाजमा देखेको छु । त्यो पुरुषको वकालत गर्ने कि नगर्ने ? उसलाई न्याय दिने कि नदिने?अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा महिलाको मात्र आवाज उठिरहेको अवस्थामा तपाईं हाम्रै दाजुभाई, वुवा छोराहरुलाई पनि अन्याय परेको छ कि ? यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
नेपाली महिला पनि क्रमसः आत्मनिर्भर बन्दैं गएका छन । चलचित्र सुटिङका क्रममा विभिन्न गाउँमा पुग्दासहरको महिलाको भन्दा गाउँको महिलामा बढी आत्मनिर्भरता देखेको छु ।पछिल्लो समयमा तिज भड्किलो बन्दै गएको छ । मेरी आमाले मनाएको तिज मैले देखेकी छु, उनले भनिन, ‘मैले बनाएको तिज पनि मेरा छोराछोरीले देख्नुपर्छ ।’
म पुरुषहरुलाई पनि सम्मान दिन पछि पर्दिन । आफ्नी आमाले बुवाको खुट्टाको पानी खादा रमाइलो लाग्छ तर बुवाले आमाको खुट्टाको खादा असहज हुन्छ । तर, अहिले त्यसमा परिवर्तन भएको छ । भाउजुको खुट्टाको पानी दाइले खादा असहज नलाग्ने रहेछ ।मेरो बुझाइमा महिलाको दुश्मन पुरुष होइनन । महिला र पुरुष दुबैलाई समान रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ‘पुरुष हामीले गर्भमा राखेर जन्माएको जात हो । हामीले पुरुषसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्ने ?
देशमा पछिल्लो दश वर्षमा ब्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । देशको उच्चतहमा महिलाहरु हुनुपर्ने आवाज आज साकार भएको बताइन । ‘राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ, प्रधानन्यायाधीस हुनुहुन्छ,।
मेनका थापाजस्ता छोरीहरु देशमा प्रशस्त मात्रामा हुने यसले समाजमा चाडै परिवर्तन आउँछ ।अबका दिनमा महिलाहरु हेपिएर, दबिएर बस्ने जमाना ८० प्रतिशत हटिसकेको छ ।
Kasko bhanai ho yo patrakar jyu ?
kiran bista says:
Yes sahi ho …rekha thapa Didi ….
तमलोपा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सामेल हुने
बिहे नेपालमा दुलाह कतारमा
मोटसाइकल दुर्घटनामा दाजुभाइको मृत्यु
यी नारी,जस्ले रचे नेपाली इतिहास
धारिलो हतियार प्रहार गरि आमाको हत्या
भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बैद्य माओवादीको घोषणा
प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हालियो
कस्तो आउला नयाँ शक्तिको ल्वाङ घोषणापत्र ?
प्रधानमन्त्री ओली जनकपुरमा
कम्युनिष्ट एकता अपरिहार्य – अध्यक्ष दाहाल
चिल्लो गलैचामा गमला राखि कृषिमन्त्रीले धान रोपे
पार्टी एकताका विषयमा छलफल गर्न , माओवादी केन्द्रको बैठक आज बस्दै